Casemiro ny tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Casemiro ny tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "The New Makalele". Ny tantaranay momba ny tantaram-pianakaviana Casemiro sy ny tantara momba ny tantaram-pitiavana tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakantsika dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony fa vitsy no mihevitra ny momba an'i Biographie Biographie izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Carlos Henrique José Francisco Venâncio Casimiro fantatra fotsiny amin'ny 'Casemiro' Teraka tamin'ny 23rd of February, 1992 ao São José dos Campos, São Paulo, Brezila. Tonga teto amin'ity izao tontolo izao izy tamin'ny alalan'ny Venancio Magda de Faria Casemiro (reny) sy Servando Casimero (ray).
Casemiro no zanaka lahimatoan'ny ray aman-dreniny. Niaritra fanombohana ny fahazazana amin'ny maha-reny niteraka azy izy [tantara manontolo ao amin'ny lahatsoratra]. Ny mamanay sarobidy, Venancio no nanao izay azony natao mba hanomezana fanabeazana azy. Ny fahantrana niatrika zaza mahantra dia nanomana an'i Casemiro ho any amin'ny lozam-pifidianana mahatalanjona iray izay tonga tamin'ny alalan'ny fanambadiana sy ny fahavononana hahomby.
Nandritra ny fahazazany nandritra ny fotoam-pialan-tsasatra tany Sao Paulo ambanivohitra, dia nidina an-dalambe ny zazalahy kely ary toy izany koa ny fiarovana ny harena. Tsy dia niavaka i Young Casemiro, afaka nanampy betsaka (fanatsarana ny fanabeazana sy baolina kitra) amin'ny fomba mahery vaika indrindra izy.
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
I Nilton de Jesus Moreira, tompon'ilay sekoly fiantsonan'ny baolina malaza iray izay nanampy an'i Casimiro hiditra ao amin'ny akademia.
Paulista De Futebol Akademia Sao Paulo dia tao no nanombohan'i Casemiro kely ny baolina zatovo.
Nahatsapa fifaliana lehibe izy ary hatramin'izao, dia mbola velom-pankasitrahana noho ny fahafahana nomen'i Nilton de Jesus Moreira sy ny fianakaviany. Tsy nandiso fanantenana azy velively izy.
Niezaka mafy i Casemiro mba ho lasa vokatra mahasoa São Paulo FCny tanora. Nanomboka tamin'ny taona 11 ambony izy dia nanao kapitenin-tsambo ho an'ny sisiny. Nahazo ny lazany izy rehefa nandray anjara tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2009 FIFA U-17 izay nahavita be. Izany koa dia nanaraka azy nitondra an'i São Paulo hitondra ny Copa Sudamericana amin'ny 2012. Izany dia nahatonga azy ho eo am-pijerena maso sy eo amin'ny lisitr'ireo andian-dalan'ny scouts sy mpitantana ny klioba manerana an'i Eoropa. Tsy naharitra ela izany Real Madrid Niantso ny asany izy.
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Casemiro dia avy amin'ny fianakaviana iray mahantra ambany tsy tapaka any an-dakilasy izay tarihin-dreniny iray monja, ny reniny ambony izay fantatra fotsiny hoe Venancio. Eto dia nomeny fohy momba ny fianakaviany ianao.
RAY: Casemiro dia mahatsiaro maharary ny rainy izay mbola velona hatramin'izao amin'ny fotoana hanoratana azy. Ny kodiarana dia tsy mitazona fahatsiarovana tsara. Ny kely Casemiro tamin'ny taona 5 dia nahita ny rainy (Servando Casimero) tamim-pahasahiana nandao ny tranony noho ny olana ara-pifanarahana niaraka tamin'ny mamanany. Tsy niverina ny patriarika na dia efa nataon'ny zanany aza ilay izy.
Rehefa miresaka momba ny rainy mandritra ny resadresaka Globoesporte, Hoy i Casemiro ..."Raha mahita azy eny an-dalambe androany aho dia tsy hanaiky azy. Niady mafy tamin'ny reniko izy tamin'izaho dimy taona ary namela ny fianakaviako ho an'ny reniko mba hitantana. Te-hihaona aminy aho satria tsy tezitra aminy aho. Izany no tian'Andriamanitra ho ahy. Izany no antony nandaozako foana ny fomba "
rENY: Na dia nilaza aza izy fa tsy manana alahelo avy amin'ny rainy, nilaza i Casemiro fa nanenina izy noho ny nananany ny reniny nandritra ny famoronana azy.
Casemiro sy ny reniny - Venancio Magda de Faria Casemiro
Amin'ny teniny ... "Nifandray tamiko foana ny reniko, nanohana ahy foana foana izy ary nisaotra an'Andriamanitra fa afaka manampy ny fianakaviako aho. Faly aho fa nanana azy teo anilako raha nilako izany indrindra, "hoy ny mpilalao São Paulo.
Manana namana roa i Casemiro. Ny rahalahiny, Lucas Casemiro ary ny rahavavy kely iray antsoina hoe Bianca Casemiro.
Casemiro sy ny iray tampo aminy
"Rehefa any an-trano aho, dia nidina feon-kira kely vitsivitsy (mihomehy) ny rahalahiko." Misy ihany koa ny famoronana. Manampy amin'ny famerenam-peo i Lucas, " hoy i Casemiro izay 6 taona efa antitra noho i Lucas rahalahiny sy 12 taona zokin'i Bianca rahavaviny.
Bianca Casemiro dia mpiambina mafana Real Madrid afokasoka. Tiany ny mijery ny zokiny lahy. Araka ny azy "Toy ny sarimihetsika". Saingy tena marina. Azony atao ny mihinana ny fantsika rehetra mandritra ny 90 minitra mandritra ny fiderana ny zokiny lahimatoa.
Bianca - dia mampihetsi-po ny rahalahiny zokiny Casemiro
Avy amin'ny zava-bitany Real Madrid Ny fandaharam-pampianarana, Casemiro dia mbola mahita fotoana tsara miaraka amin'ny zandriny. Eto ambany ny kintan'ny baolina kitra izay manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny zandriny ao amin'ny dobo filomanosany.
Casemiro- Mandany fotoana mahandro miaraka amin'ireo mpifankatia
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny tantaram-pitiavan'i Casemiro dia manodidina ny vehivavy iray, Anna Mariana Ortega Brahm, teratany iray Breziliana. Nampifandraisin'ny mpivady ny kavina tamin'ny volana 2014. Tamin'izany fotoana izany i Anna Mariana Ortega dia 25 sy Casemiro 22-taona.
Ny fitiavana Birds- Casemiro sy Anna amin'ny andro fampakaram-bady
Beautiful Anna dia teraka tamin'ny 12th Jolay 1989 izay midika hoe 3 taona izy noho ny vadiny mpilalao baolina.
Love Birds-Casemiro sy Anna
Anna dia mitarika eo amin'ny Breziliana ny indostrian'ny makia, tsy mahagaga raha mijery azy tsara foana izy sary. Ity ambany ity ny sarin'ny andraikiny.
Ny vadin'i Casemiro dia manao izay tsara indrindra vitany
Ny mpilalao matihanina matihanina dia avy amin'ny malaza iray Breziliana fianakaviana. Izy dia iray amin'ireo efatra rahavavin'i Anna Paula Ortega, Anna Carol Ortega ary Anna Beatriz Ortega.
Araka ny pejy Instagram ao aminy, dia izy koa Business Administration graduate. Anna dia tena active ao amin'ny media sosialy. Matetika izy no mamoaka selfies na sary momba azy sy ny anjarany amin'ny fotoana manokana. Manana zazavavy kely antsoina hoe Sara Casemiro izy ireo.
Ny sarin'ny fianakavian'i Casemiro
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Indray andro nisy aretina
Tamin'ny taona 14, voan'ny aretina hepatita i Casemiro. Fotoana nahatongavany tany São Paulo club mba handray anjara amin'ny baolina kitra ambony. Indray andro dia niharatsy ny fahasalamany.
Tamin'io fotoana io dia malemy saina sy marary i Poor Casemiro. Nandany telo volana izy nefa tsy nahavita nanao izany. Amin'ny teniny ...
"Raha vao nahazo an'i São Paulo aho, dia nahazo io olana io aho, aretina antsoina hoe Hepatitis. Nandany fotoana aho tsy nampiofana, tsy nilalao. Nalahelo aho ary nanahy fa tsy nahomby aho. Olona maro no niresaka tamiko momba ny fiadanan-tsaina. Tamin'ny fotoana iray, nieritreritra ny hiala ny baolina aho na dia efa tafarina aza. Ny fijaliako taloha sy ny fijaliako dia nankahery ahy indrindra mba hitazomana ny asako. "
Tsy naharitra ela talohan'ny nanombohan'ny mahantra sy ny fotoana nanombohan'ny kintana tsy nanam-bola ny vola.
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fanorenana an'i Makalele
Casemiro- Manangana an'i Makalele
Ny mpilalao baolina kitra iray sy ny mpaninjara mavitrika iray izay naorina avy any Makelele. Ny trangan-javatra hafa dia nanaraka an'i Casemiro sy Makelele. Makalele dia nahazo ny loka La Liga roa sy ny Ligy Champions iray nandritry ny telo taona tao Santiago Bernabeu talohan'ny nandaozany an'i Chelsea taorian'ny fifanolanana. Fotoam-pahaizana tanteraka izany, iray izay tsy haverina aorian'ny fialany.
Raha ny marina, nandritra ny telo taona taorian'ny nifindran'i Makelele, Real Madrid Tsy nahomby tamin'ny fisian'ny trophy tokana. Mazava ho azy fa tsy hita tao amin'ny faritra afovoan'ny ekipa ny fampiasany ara-pihetseham-po, ny famaizana am-pahibemaso, ny fandehanana mivoatra sy ny fahamendrehana. Nafahan'i Casemiro nafangarony izany, izay nampiakatra ny herisetra, ny ady an-trano, ny hery ary ny fiarovan-tenan'ny fiarovana mahery vaika dia nankasitrahan'ny Real Madrid mpankafy.
Casemiro- Tena tian'ny mpankafy Real Madrid
Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fampitahana amin'ny Kante
Ny fanontaniana dia; Iza no tsara kokoa amin'i Casemiro sy N'golo Kante? ...
Eo anelanelan'i Casemiro sy Kante, iza no tsara kokoa?
Iza moa no tsara? ... Casemiro OR Kante?? ...